Macdanta King Sulaymaan (qaybta 19), Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Macdanta Boqor Sulaymaan <abbr> (qaybta 19)
Maanta waxaan rabaa inaan kaala hadlo qalbigaaga. Qalbigeyga? Markii ugu dambeysay ee aan aado baaritaanka, way igu dhufatay. Waan ordi karaa, ciyaarta ciyaarta tennis ... Maya, wax dan ah igama gelin xubnaha jirka ee ku yaal laabtaada ee dhiigga qaada, laakiin wadnaha, oo u muuqda in ka badan 90 jeer buugga Maahmaahda. Hagaag, haddii aad rabto inaad ka hadasho qalbiga, samee, laakiin uma maleynayo inay muhiim tahay - waa inay jiraan waxyaabo ka sii muhiimsan nolosha Masiixiyiinta oo aan ka wada hadli karno. Maxaad iigu sheegi weyday wax ku saabsan barakada Ilaahay, sharciyadiisa, adeeciddiisa, waxsii sheegyada iyo ... Sug oo arag! Sida qalbigaaga jirku uu aad muhiim ugu yahay, sidoo kale qalbigaaga gudaha ayaa ah. Xaqiiqdii, waa mid aad u muhiim ah in Eebbe kugu amro inaad ilaaliso. Taasi waa mudnaanta koowaad. Iskusoo wada duub, ilaali qalbigaaga (Maahmaahyadii 4,23; Nolosha Cusub). Marka, waa inaan si wanaagsan u daryeesho. Ah, hadda waan fahmay waxaad rabto inaad ii sheegto. Umalayn maayo inaan xakameyno niyadda iyo dareenkeyga. Waan ogahay taas. Waxaan had iyo jeer ka shaqeeyaa is-xakamaynta oo sifiican, waan baadi goobaa markasta iyo ka dib - gaar ahaan taraafikada - laakiin haddii kale, waxaan u malaynayaa, inaan si fiican u qabsaday. Markii uu Sulaymaan wax ka qoray quluubteenna, wuxuu ka welwelsanaa waxyaabo aad uga muhimsan marka loo eego dhaarta (ereyga) ama luqadda wax iftiimisa. Waxay ku saabsan tahay saameynta qalbiyadeenna. Quluubteenna waxaa lagu cadeeyay Baybalka inuu yahay isha nacaybka iyo xanaaqa. Dabcan, taasi sidoo kale aniga ayay igu dhacdaa. Xaqiiqdii, waxbadan ayaa ka soo baxa qalbiyadeenna: damacyadeena, ujeeddadeenna, hamigeenna, hamigeenna, riyooyinkeenna, damacyadeena, rajooyinkayaga, baqdinteenna, damackeenna, hal-abuurkeenna, damacyadeena, iyo masayrkeenna - runtii wax walba oo aan nahay , waxay asal u tahay qalbiyadeenna. Sida qalbiga jirkeenu udub dhexaadka u yahay jirkeena, sidoo kale qalbiyadeena ruuxiga ah waa udub dhexaadka iyo xudunta jiritaanka jirkeena oo dhan. Ciise Masiix qalbigiisa si taxaddar leh ayuu u taxaddaray. Wuxuu yidhi, Sababta oo ah waxa qalbigaagu had iyo jeer go'aaminayo waxaad leedahay. Qofka wanaagsan wuxuu kuhadlaa ereyo wanaagsan qalbi wanaagsan, iyo qofka xun wuxuu ku hadlaa ereyo xun qalbi xun (Matayos 12,34-35; Nolosha Cusub). Hagaag, sidaa darteed waxaad dooneysaa inaad ii sheegto in wadnahaygu yahay sida isha wabiga. Wabigu waa ballaadhan yahay, wuuna dheer yahay, oo qoto dheer buu leeyahay, Oo ilkeeduna waxay ka soo baxaysaa buuraha, miyaad ahayn?
Xaq! Wadnaheena caadiga ah wuxuu si toos ah saameyn ugu leeyahay meelkasta oo kamid ah jirkeena, madaama ay dhiiga ku daato xididdada iyo sidookale masaafo badan oo xididdada dhiigga ah sidaasna ay kuhayaan howlaheena muhiimka ah. Wadnaha gudaha, dhanka kale, wuxuu hagu hayaa habka nolosheena. Ka fikir waxkasta oo aad rumeysan tahay, waxyaabaha aad aaminsanahay (Rooma 10,9-10), waxyaabaha noloshaada beddelay - dhammaantood waxay ka yimaadeen meel qoto dheer oo qalbigaaga ka mid ah (Maahmaahyadii 20,5). Qalbigaaga dhexdiisa waxaad naftaada ku weydiisaa su'aalo sida: Maxaan u noolahay? Waa maxay macnaha noloshayda Maxaan subaxnimada u kacaa? Maxaan aniga ahay iyo waxaan ahay? Maxaan uga duwanay eeyga? Ma fahamtay waxaan rabo inaan sheego? Qalbigaagu wuxuu kaa dhigayaa qofka aad tahay. Qalbigaagu waa adiga. Qalbigaagu wuxuu go'aamiyaa naftaada aad u qoto dheer, run ahaantaada. Haa, waad qarin kartaa qalbigaaga oo waxaad gashan kartaa waji xidho maadama aadan dooneynin dadka kale inay gartaan waxa aad runti u fikirto, laakiin taasi taasi ma bedesho qofka aan ku dhex jirno qoto dheer ee jirkeena, haddaba bal eeg sababta ay qalbiyadeenu muhiim ugu yihiin waa? Ilaah wuxuu adiga iyo innaga iyo dhammaanteenba innaga sheegayaa in qof walbaa mas'uul ka yahay daryeelka quluubtooda. Laakiin maxaa qalbigayga ku jira? Qaybta labaad ee Maahmaah 4,23 ayaa jawaab ka bixisa: maxaa yeelay qalbigaagu wuxuu saameyn ku leeyahay noloshaada oo dhan (Nolol cusub). Ama sida Kitaabka Quduuska ahi u leeyahay: Fiiro u yeelo fikirkaaga, maxaa yeelay fikirkaagu wuxuu go'aamiyaa noloshaada (si xor ah loo tarjumay). Marka waa meesha ay dhammaanteed ka bilaabmayso? Maaddaama hal abuur oo geed ahi uu ka kooban yahay geedka oo dhan oo ay suuragal tahay kayn, noloshayda oo dhanna qalbigayga kuma jiraan? Haa waa sidaas. Nolosheena oo dhan ayaa ka soo baxda qalbiyadeena, qof kasta oo aan ku jiro qalbiyadeenna ayaa soo bandhigi doona dhaqso ama waqti dheer hab dhaqankeena. Sida aan u dhaqanno ayaa asal ahaan aan muuqan - badanaa waqti dheer kahor intaanan ugu dambeyntii sameynin. Hawlahayagu runtii waa ogeysiisyada aan soo qaadnay ee meesha aan joognay muddo dheer. Weligaa ma tiri: Ma ogi sida ay aniga igu aheyd. Hadana waad sameysay. Runtu waxay tahay inaad inbadan ka fikiraysay oo markii fursadu si kadis ah ku timid, waad sameysay. Fikradaha maanta jira waa ficillada berri iyo natiijooyinka. Waxa wali masayrku maanta noqon doonaa mid kacsan. Wixii qiiro leh ee maanka ku hayaa maanta waxay noqon doonaan dambiile nacayb ah berri. Waxa xanaaqa maanta waa xadgudubka berrito. Waa maxay rabitaanka maanta waa sino berri. Waa maxay hunguri maanta waa khayaanada berrito. Waxa lagu eedeeyaa maanta waa cabsi berri.
1 Maahmaahyadii 4,23 waxay ina baraysaa in dhaqankeenu ka soo baxo gudaha, meel il qarsoon ka yimid, qalbiyadeena. Taasi waa awooda ka dambeysa ficiladeena iyo ereyadeena; Sida uu qalbigiisa ku fikirayo, waa (Maahmaahyadii 23,7, oo si xor ah looga tarjumay Kitaabka Quduuska ah). Wixii ka yimaadda qalbiyadeenna waxaa lagu muujiyaa is-hoosaysiinta wax kasta oo khuseeya deegaankayaga. Waxay i xasuusineysaa baraf baraf ah. Haa, waa sax, maxaa yeelay dhaqankeenu waa uun caarada barafka. Xaqiiqdii, waxay ku dhacdaa qaybta aan la arki karin nafsaddeenna iyo qaybta ugu weyn ee barafka biyaha ka hooseeya biyaha waxay ka kooban tahay isugeyn sannadaheenna oo dhan - xitaa tan iyo markii aan uurka ku jirnay. Ciise wuxuu ku nool yahay qalbiyadeena isagoo u maraya Ruuxa Quduuska ah (Efesos 3,17). Ilaah wuxuu had iyo jeer ka shaqeynayaa qalbiyadeenna si uu u qaato qaabkii Ciise Masiix. Laakiin sannadihii la soo dhaafay waxaan sameynay waxyeello aad u badan qalbiyadeenna maalin walbana fikradaha ayaan isku qarxinaa. Sidaa darteed waqti badan ayey qaadataa. Waa geedi socod gaabis ah in lagu lebisto qaabka Ciise.
Ku lug yeela
Marka waxaan u daayaa Ilaahay oo isaguna wuu daryeelayaa wax walba? Taasi maahan sida ay u shaqeyso. Ilaah wuxuu kugu dhacey dhinacaaga inuu ku weydiiyo inaad kaqeyb qaadato, sideense ku kalifay inaan sameeyo arintaas? Waa maxay qaybtaydu? Sidee baan qalbigayga u daryeelaa? Bilowga hore waa lagama maarmaan in dhaqankaaga la xakameeyo. Tusaale ahaan, haddii aad u aragto in aad u dhaqanayso qof aan Masiixi ahayn, waa inaad riixdaa batoonka istaaga oo aad tixgelisaa cidda aad ku jirto Ciise Masiix oo aad sheegatid nimcadiisa.
2 Aabe ahaan iyo awoowe ahaan, waxaan bartay - badanaana sifiican bay u shaqeysaa - in la dejiyo ilmo ooyaya iyada oo loo soo jeedinayo wax kale. Had iyo jeer marwalba way shaqeeysaa isla markaaba. (Waxay u egtahay inaad xirto shaati. Qalbigaaga ayaa go’aaminaya badhanka ugu horeeya midkee badhankiisa. Dabeecadeena ayaa si fudud u socota ilaa dhamaadka. Haddii badhanka ugu horeeya uu khalad galo, wax walbana waa khaldan yihiin!) Waxaan u maleynayaa inay sharraxaaddu fiicantahay ! Laakiin way adag tahay. Markasta oo aan isku dayno mar labaad iyo mar labaadba oo aan caddeeyo ilkahayga inay noqdaan sidii Ciise oo kale; Kuma guuleysto. Maahan isku dayga iyo shaqo adag. Waxay ku saabsan tahay nolosha dhabta ah ee Ciise Masiix oo ina tusaysa innaga. Ruuxa Quduuska ahi wuxuu diyaar u yahay inuu inaga caawiyo sidii aan u xakamayn lahayn oo u tuurin karno fikradaheenna xun markay isku dayayaan inay galaan qalbiyadeenna. Hadday fikrad qaldan dhacdo, albaabka xir xir si uusan u galin. Caawin kuma tihid naxariista fikradahaaga ee ku soo dhacaya madaxaaga. Hubkan waxaan kaga adkaaneynaa fikradaha diidmada ah oo waxaan barinnaa inay adeecaan Masiixa (2 Korintos 10,5 NL).
Albaabka ha uga tegin meel aamin ah. Waxaad haysataa waxkasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku noolaatid nolol cibaado leh - waxaad haysataa qalab kuu sahlaya inaad qabato fikradaha aan qalbigaaga ku jirin. (2 Butros 1,3: 4). Waxaan sidoo kale kugu dhiirigelinayaa inaad Efesos 3,16 ka dhigto ducada noloshaada shaqsiyadeed. Haddaba, Bawlos waxa uu ku weydiisanayaa in Ilaah ku siiyo xoogga maalkiisa badan inaad xoog ku yeelato gudaha ruuxiisa. Ku koraan adkaynta joogtada ah iyo xaqiijinta jacaylka aabbahaa iyo xanaaneynta ee aag kasta oo noloshaada ah. Qalbigaaga daryeel. Ilaali. Ka ilaali. Fiiro gaar ah u yeelo fikradahaaga. Ma waxaad leedahay waxaan mas'uul ka ahay? Waad haysataa waadna la wareegi kartaa.
1 Max Lucado. Jacayl mudan in la siiyo. Bogga 88.
2 Nimcada kaliya kuma eka eexla'aanta; waa awood rabbaaniga ah nolol maalmeedka (2 Korintos 12,9).
Macdanta Boqor Sulaymaan (Qaybta 19aad)